मध्यरात हुनै लाग्दा लकडाउन र एसईई परिक्षाको बारेमा सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/मध्यरात हुनै लाग्दा लकडाउन र एसईई परिक्षाको बारेमा सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा !!
मध्यरात हुनै लाग्दा लकडाउन र एसईई परिक्षाको बारेमा सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा !!
सरकारले सबै पसल र निजी सवारीसाधन जोरबिजोरका आधा`रमा सञ्चा`लन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार अबेर सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । न्त्रिपरिषद्को बुधबार राति सम्पन्न बैठकले सबै किसिमका पसलहरु सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । यसैगरी निजी सवारीसाधन जोर-बिजोरका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारको प्रतिनि धिसभा बैठकमा जनजीवन सहज पार्नका लागि निर्णय लिने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को राति १० बजे सकिएको बैठकले जनजीवन सहज पार्नका लागि पसल खोल्न दिने र सवारी साधन संचालनमा पनि खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो । ‘ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायतका निजी सवारी साधन संचालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । ती सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीमा संचालन हुनेछन् । लामो रुटकालाई भने अहिले अनुमति नदिने भनिएको हो ।
त्यस्तै सरकारले यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एस ई ई) नगर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालयको अन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई हाललाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयले सुझाव कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। कार्यदलले एसईई परीक्षाबारे दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्ताव तयार भएको थियो। गत चैत ६ गते हुने कक्षा १० को एसइई परीक्षा कोरोना जोखिमका कारण गत चैत ५ गतेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि स्थगित भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस वर्ष एसईई नगर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेका थिए । अब विद्यालयहरूले आन्तरिम मूल्यांकनको नम्बर परीक्षा बोर्डमा पठाउनेछन् र, त्यसकै आधारमा ग्रेड निर्धारण गरेर परीक्षाफल सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।